वर्षदिनभित्र देशभरका दश हजार स्थानमा निशुल्क वाइफाइ उपलब्ध गराउने वर्ल्डलिंकको लक्ष्य
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स प्रा.लि. ले आफ्ना सेवा सुविधा सम्बन्धी भइरहेका कार्य र आगामी योजनाहरुबारे जानकारी दिएको छ । वर्ल्डलिंकले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरि कम्पनीका उपलब्धी र कार्ययोजना बारे जानकारी दिएकाे हाे । पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट, वायर म्यानेजमेण्ट प्रोजेक्ट, कर्णाली प्रोजेक्ट, इन्टरनेटसम्बन्धी संचालन गरिएका चेतनामूलक कार्यक्रम र हाल संचालनमा रहेका इन्टरनेटको नयाँ स्ट्याण्डर्ड नामक प्रोडक्टलगायतका विषयमा उक्त अवसरमा अवगत गराइएकाे थियाे ।
वर्ल्डलिंकका अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल, संचालकद्धय मनोज अग्रवाल, विजय जालन र सीईओ केशव नेपालको उपस्थिति थियो । वर्ल्डलिंकले हालसम्म देशका ७० वटा जिल्लामा आफ्नो सेवा विस्तार गरिसकेको छ । सेवामा निरन्तर परिमार्जन र सुधार गर्दै वर्ल्डलिंकले हाल रु. १२५० मा गो एप, टाईम ब्याक, म्यानेज्ड वाईफाई, नेटटिभी र सेफनेट जस्ता इन्टरनेटको नयाँ स्ट्याण्डर्ड नामक प्रोडक्ट उपलब्ध गराउदै आएको कम्पनीका सीईओ केशव नेपालले जानकारी दिए ।
कम्पनीले पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट अन्तर्गत नि:शूल्क रुपमा काठमाणडाै‌ उपत्यकामा पशुपति विकास क्षेत्र, बौद्ध, शंख पार्क, बालाजु बाईसधारा, स्वयम्भु, बसन्तपुर, एयरपोर्ट उपत्यका बाहिर पोखरा र वीरगञ्ज महानगरपालिकाकाे विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा सेवा दिँदै आइरहेको छ । भविष्यमा अझ थप स्थानहरुमा सेवा दिँदै जाने नेपालले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सीर्एओ नेपालले कम्पनीको सेवा सुविधा र आगामी योजना बारेमा जानकारी गराएका थिए । वर्ल्ड लि‌ँक वि‍‌ स‍‌ २०५२ सालमा स्थापना भएको हाे ।